छवि र सम्पादन फोटो सिर्जना गर्न कार्यक्रम
तपाईं धेरै कार्यक्रम थाह तस्वीर सिर्जना? एक अनुभवहीन प्रयोगकर्ताले प्रमुख छ जो को "Photoshop" सफ्टवेयर मात्र एक जोडी, नाम हुनेछ। तर ग्राफिक्स साथ काम गर्ने उहाँले, इन्टरनेट तपाईं, तपाईं सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सम्पादन र तस्बिर सुरक्षित 20 भन्दा बढी उपकरणहरू पाउन सक्नुहुन्छ भनेर थाह छ।
यी अनुप्रयोगहरू मात्र तस्बिरहरू सिर्जना गर्न मद्दत, तर पनि सम्पादन गर्नुहोस्। कहिल्यै मा Adobe Photoshop काम छ जो कोहीले, कार्यक्रम, पृष्ठभूमिमा परिवर्तन रंग, रंग, प्रकाश र संतृप्ति काम गर्न सक्छन् भनेर थाह छ। को उपस्थिति परिवर्तन र retouching के, विशेष प्रभाव सिर्जना गर्नुहोस्।
तर जसको लागि यो सबै छ? अब इन्टरनेट को विकास यो सफ्टवेयर धेरै आवश्यक छ। साइट काम गर्ने डिजाइनर लागि आवश्यक तस्बिरहरू सिर्जना गर्न कार्यक्रम। फोटोग्राफर आफ्नो तस्बिर प्रक्रिया गर्न को लागि ग्राफिक सम्पादकको आवश्यक छ। तस्बिरहरू काम मुद्रण केन्द्र, मुद्रण सेवा र अरूलाई।
अर्को, हामी आधारभूत सफ्टवेयर, जो मात्र होइन छवि सिर्जना गर्नेछ, तर पनि आफ्नो लेबल, मूल्य सूची वा काम 3D-तस्बिरहरू संग थप्न विचार गर्नुहोस्।
यो मुख्य र मनमा आउने रूसी, मा तस्बिरहरू सिर्जना गर्न पहिलो कार्यक्रम हो। हुनत धेरै प्रयोगकर्ताहरू पाउन सक्छ र निःशुल्क pirated संस्करण यो सैद्धांतिक भुक्तानी भएको छ। यो सफ्टवेयर यी सबै चुनौती पूरा गर्दछ। यो तपाईं दृष्टान्तहरू सिर्जना गर्न र अवस्थित वस्तु सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
सफ्टवेयर लामो ब्रान्ड नाम भएको छ र अक्सर बस "Photoshop" साथै आफ्नो कार्यक्रम गर्न सबै सम्बन्धित रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अब त्यहाँ पहिले नै संस्करण एस 2017. सबै वर्तमान सम्पादन उपकरण सुधार प्रत्येक अद्यावधिक छ। तर आवेदन अझै पनि व्यावसायिक सम्पादन उपकरण रेखापुंज दृष्टान्तहरू मा नेता छ।
यस Google फोटो-तस्बिरहरू सिर्जना गर्न कार्यक्रम छ। यो स्क्राच देखि एक तस्वीर आकर्षित गर्न असम्भव छ, तर पहिले नै कोलाज सिर्जना गर्न उपलब्ध आधारित हुन सक्छ। फ्री सफ्टवेयर, धेरै स्वरूप समर्थन गर्दछ। त्यहाँ पनि भिडियो सिंक छन्।
स्लाइड शो र प्रस्तुति, कोलाज र चलचित्र आफ्नो फोटो देखि संग कार्यक्रम काम गर्न सक्छन्। सुविधाजनक, स्वतः नयाँ पिकासा एल्बम, एक पीसी मा फोटो क्रमबद्ध सिर्जना गर्छ। तिनीहरूले नयाँ फोटो, व्यक्तिगत फोल्डरहरू, पासवर्ड सेट थप्न सक्नुहुन्छ, र विशेष विषय नियुक्त गर्नेछ।
यहाँ उपलब्ध सम्पादन: भिन्नता र चमक रंग सुधार, रातो-आँखा कमी, परिवर्तन, storyboards, आदि
Adobe बाट अर्को उत्पादन। यो चित्र बनाउनको लागि एक कार्यक्रम छ। तर "Photoshop", जो संग काम गरिरहेको छ विपरीत रेखापुंज ग्राफिक्स, यो अनुप्रयोग भेक्टर ग्राफिक्स सिर्जना गर्छ। यो Photoshop भन्दा एक पेशेवर सफ्टवेयर छ। newcomers शायद उहाँले जटिल र विविध छ किनभने उसलाई काम।
Illustrator अक्सर वेब डिजाइनर, भिडियो सम्पादक र यति मा आवश्यक छ। आवेदन मा तीन-आयामी विशेष प्रभाव, विकृति र विरूपण संग काम गर्दै छन्। पारदर्शिता उपकरण प्रयोग गरेर वास्तविक समयमा विशेष प्रभाव सिर्जना, रंग, आदि
यो inscriptions साथ चित्रहरु बनाउनको लागि अर्को कार्यक्रम छ। उनको बारेमा एक पटक "Photoshop" को निःशुल्क संस्करण खोजे गर्नेहरूलाई थाहा छ। को कार्यहरू एक नम्बर सामना गर्न सजिलो छ, जो Adobe Photoshop, यो हल्का संस्करणमा औसत प्रयोगकर्ता आवश्यक छ। तपाईं, एक महाविद्यालय सिर्जना गर्न फोटो शीर्षक थप्न छवि समायोजन सोधियो भने, Paint.NET कि सामना गर्न सजिलो छ।
सादगी - यस आवेदन मुख्य सुविधा। सबै, स्पष्ट वर्णन गर्न सजिलो छ र पनि अनुभवहीन प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध छ। तपाईं तहहरू काम प्रभाव थप्न प्लग इन र पूर्वसेटहरू सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ।
को गिम्प GenericName
फोटो र चित्र संग अर्को लडाकु। यो ग्राफिक्स र भेक्टर ग्राफिक्स संग काम गर्दछ निःशुल्क सफ्टवेयर छ। यो अक्सर लोगो बनाउन, रंग सुधार समाप्त छवि, सम्पादन फोटो, आदि को उत्पादन
सफ्टवेयर सम्पादन सरल कार्यहरू सामना गर्न सरल र सजिलो छ। उहाँले रेखाचित्र लागि उपकरण को एक सेट छ। धेरै फोटो संग सम्भव समानान्तर काम, ब्याच प्रक्रिया, फिल्टरिङ वा जोखिम प्रयोग गर्नुहोस्। क्रप, घुमाउन, बाङ्गो, दर्पण र यति मा: परिवर्तन को तरिका प्रयोग गर्नुहोस्।
Movavi फोटो सम्पादक
बिटमैप सम्पादक सरल कार्यहरू संग copes। यसलाई अवैतनिक फोटोग्राफर वा सरल प्रयोगकर्ता दृष्टिकोण लागि तर तहहरू काम गर्दैन र विशेष शैली को अनुसूची आकर्षित गर्दैन। यसको विशेष सुविधा एक सरल इन्टरफेस मानिन्छ।
संग Movavi फोटो सम्पादक, तपाईं चित्र, सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ छवि समायोजन, थप-पातलो, लागू फिल्टर र विशेष प्रभाव दर्जनौँ प्रयोग गर्नुहोस्। सफ्टवेयर पेशेवरहरुको लागि उपयुक्त छैन, तर घर प्रयोगकर्ताको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन मानिन्छ।
तस्वीर एक मूल्य सूची सिर्जना गर्न MyBusnessCatalog कार्यक्रम पूर्ण फिट। सामान्य मा, चित्र संग मूल्य सूची - यो पूर्ण सूची र मूल्य सूची बीच एक "मध्य जमीन" लिन्छ कि काम गरिरहेको उपकरण हो। यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा तपाईं एउटै आकार र अनुपात एक कम्प्याक्ट छवि बनाउन सक्षम हुनेछ।
विकल्प मात्र वस्तु नाम र मूल्य छ जसमा एक्सेल मा एक सरल तालिका, भन्दा धेरै रोचक देखिन्छ। कहिलेकाहीं चित्रहरु संग यो दायरा बुझ्न सजिलो छ। तर तिनीहरू सही छैन र अनुपात संग fooling छैन जहाँ एक्सेल, तस्विरहरु थप्न छैन क्रममा, यो राम्रो MyBusnessCatalog सबै डाटा थप्न छ।
3D-तस्बिरहरू सिर्जना धेरै लागि कार्यक्रम। उल्लिखित रूपमा, Adobe बाट तिनीहरूलाई र सम्पादकहरूले संग काम गर्न सक्छन्, तर त्यहाँ एक विशेष सफ्टवेयर, तीन-आयामी ग्राफिक्स काम गर्न मात्र लक्ष्य जो छ।
Images3D - यो तयार बनाएको तीन आयोमी छवि बनाउन मद्दत गर्नेछ सफ्टवेयर छ। बस कार्यक्रम गर्न एक तस्वीर अपलोड र क्लिक को एक जोडी बनाउन। यो एनाग्लिफ त्रिविम तस्बिरहरू सिर्जना गर्छ।
Zoner 3D फोटो निर्माता - पनि प्रोफाइल एक प्रकारको को तयारी र सिर्जना सुरु कि एक एकदम सरल कार्यक्रम छ। विशिष्ट छवि, थपिएको छ पछि जो तीन-आयामी मा परिवर्तित छ।
AnaMaker एनाग्लिफ ढाँचा र Interleave मा फोटो धर्मान्तरित। उज्यालोपन र व्यतिरेक समायोजन गर्न आवश्यक छ कि धेरै सरल सफ्टवेयर कोण समायोजन र बस एक क्लिक साथ तयार stereofoto प्राप्त गर्न।
तस्वीर भन्दा सजिलो सिर्जना गर्न कार्यक्रम पत्ता लगाउनुहोस्। इन्टरनेट मा केही वर्ष अनुपम पौराणिक "Photoshop" एक विशाल संख्या छ र यो ती सबै गणना गर्न कठिन छ। मूर्तिको सुधार संग मात्र काम गर्ने संकीर्ण-सम्पादक, छ, त्यहाँ अझ कार्यात्मक आवेदन छ तपाईं, एक तस्वीर सिर्जना गर्न यो परिमार्जन, सम्पादन, रूपान्तरण, आदि, अनुमति
एक पीसी मा सफ्टवेयर स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ नगर्ने ती लागि, त्यहाँ अनलाइन सेवाहरू छन्। बस "गुगल" आफ्नो आवश्यकता भन्न, र उहाँले तपाईं अनलाइन सम्पादन, तपाईं सबै लागू गर्न सक्षम हुनेछ जहाँ लागि टिप्न हुनेछ। तिनीहरूलाई बीच Aviary, Splashup, Pixlr र अरूलाई छ।
SQL तालिका सिर्जना समारोह - तालिका सिर्जना
हामी 'लिपि' के छ सँगै सिक्न
Wordpress स्वतः कसरी स्थापना गर्न
एउटा उदाहरण, विस्तृत विवरण, त्रुटि को प्रयोग - बायाँ (SQL) सामेल
सजावट लागि सुन्ताला कसरी सुक्खामा। सुकेको सिट्रस प्रयोग रोचक विचार
कसरी एउटा प्रस्ताव गर्न
धर्म माता - चुडैल कर्तव्य
ट्यूमर मार्कर संविधानसभा 15-3: डिकोड, प्रदर्शन स्तर। संविधानसभा 15-3 ट्यूमर मार्कर के गर्न, उच्च छन्?
लीग किंवदंतियों, टाइमो गाइड: विवरण, पासो र सिफारिशहरु
सबैभन्दा निजी Kindergartens बेल्गोरड
के स्तन को आकार निर्धारण
ब्लेंडर लागि तरकारी smoothies व्यञ्जनहरु